DEG DEG-(DAAWO)Baarlamaanka Puntland Oo Kulan Ka Yeeshay Dagaalka Sool Iyo Madaxda Sare Oo Loo Yeeray | Puntland
DEG DEG-(DAAWO)Baarlamaanka Puntland Oo Kulan Ka Yeeshay Dagaalka Sool Iyo Madaxda Sare Oo Loo Yeeray
Mudanayaasha barlamaanka Puntland oo kujira kal-fadhigoodii 42aad ee caadiga ahaa ayaa waxa ay kulan xasaasi ah ka yeesheen xaaladda gobolka Sool iyo qorshaha xoraynta gobolkaasi oo xiisad dagaal ka aloosan tahay.
Kulanka barlamaanka ayaa waxaa siweyn loogu gorfeeyey qorshaha xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Gaas ay ku doonayso inay ku xorayso gobolka Sool oo maraya meel wanaagsan.
Wararku waxay sheegayaan in gudiyo ka socda barlamaanku ay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu saraysa dowladda Puntland si ay uga wada hadlaan howlgalka iyo sidii loo dedejin lahaa qorshaha lagu qaadayo dagaalka kadhanka ah Soomaaliland.
Madaxda ugu saraysa dowladda Puntland ayaa horay si cad ugu sheegay inaysan gorgortan iyo wadahadal ka geli doonin dhulka Puntland ayna dowladdu xorayn doonto shacabka gobolka Sool.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu war culus ka soo saaray xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, dagaalka lagu xoraynayo gobolka iyo Dhibaatada haysta shacabka kunool magaalada Laascaanood.